Isantya sokunciphisa kunye nomvelisi webhokisi yeegiya, umthengisi, umzi-mveliso-ukunciphisa, ukunciphisa izixhobo, iintshulube, iibhokisi zeeplanethi, izinciphisi zesantya, iiyantlukwano, iigeyithi zokuhamba, iigeri zentsimbi, iigiya zebhokisi yezolimo, iigearktara, iigi zelori
Izinciphisi zesantya koololiwe bezixhobo phakathi kwemoto kunye nesiqwenga somatshini. Injongo yesinciphisi sokunciphisa isantya kukunciphisa i-rpm ehanjiswa phakathi kwala manqaku mabini. Isantya sokunciphisa sithatha torque yenziwe yimoto (igalelo) kwaye uyiphindaphinde. Okwesibini, ukunciphisa isantya, njengoko igama lisitsho, ukunciphisa isantya (i rpm output) yegalelo ukwenzela ukuba iziphumo zikhawuleze ngokuchanekileyo.
Igama elithi "gearbox" ligama nje eliqhelekileyo kuloliwe wegiye phakathi kwemoto kunye nesiqwenga somatshini. Ngenxa yoko, zonke izinto zokunciphisa isantya ziibhokisi zegiya.
Nangona kunjalo, ayizizo zonke iibhokisi zegiya ezinciphisa isantya segalelo. Ngelixa ingaqhelekanga, iibhokisi zegiya zinokuxhonywa ukuze kunyuswe isantya segalelo. Ukuza kuthi ga ngoku lolona hlobo luqhelekileyo lweebhokisi zegiya zizinto ezinciphisa isantya, kodwa ayizukuchaneka ukuthi zonke iibhokisi zegiya zilawula isantya.
Izithinteli zemibungu ezikhethekileyo zeGreenhouse
Ukunciphisa umbungu kwi-intshi ye-Inch Dimension Series UY
Ukunciphisa iintshulube Inch Dimension Wpa
Ukuncitshiswa kweentshulube Inch Dimension wps
Ukunciphisa umbungu Inch Dimension wpx
Ukuncitshiswa kweentshulube Inch Dimension WPDA
Ukuncitshiswa kweentshulube Inch Dimension WPDS
Ukuncitshiswa kweentshulube Inch Dimension WPDX